Ramadaana ilaalchisee ilaalchota qeeqaman jahan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Masjiida
Jiini Ramadaanaa ji'a qulqulluu jedhamuun beekamu jalqabeera. Adunyaarraa hordoftoonni amantii Islaamaa barii lafaa irraa jalqabee hanga aduun lixxutti nyaata fi dhugaatii kamiyyuu lagachauun turu. kaayyoonsaa karaa of qabuu fi kadhata dheeraa taasisuun jireenya afuuraa fi amantaa ofii cimsataniidha. Kun akka carraa jireenya afuuraa ofii xumurachuu ykn guuttachuutti ilaalama.
Lafarratti garuu wanti salphaa fi qajeelaa fakkaatee yaadaa fi ilaalcha namootaa yeroo dheeraaf addaan qoqqoodee jira.
Goodayyaa suuraa Fatma Wardy dhadhaa baattee jirti
Qabxiileen kanaa gaditti jiran ilaalchota dogoggoraa xiinxala barataa saayinsii Islaamaa fi Shari'aa akkasumas nama Quraana guutuusaa sammuusaatti yaadachuu danda'u Shaabir Hasaniin tarreefamaniiru.
Gartokkeen isaanii falaasamoota irratti kan hundaa'an fi qabxiileen kaanis hiikaa fi xiinxala kennuuf banaa kan tahaniidha.
Ilkaan qulqulleeffachuun ykn rigachuun sooma hiikuu dha.
Goodayyaa suuraa Ilkaan rigachuun fayyummaaf gaariidha jedha Dhaabbati Biyyoota Gamtoomanii
Akka yaada hayyootaatti ilkaan rigachuun sooma hiikuu miti.
Akka yaada Hassanitti namootni tokko tokko waanti xiqqoon akka meentaa saamunaa ilkaanii keessa jirtu sooma hiikuuf gahaa dha jedhanii amanu. Beektonni addunyaa hedduun ilkaan rigachuun sooma irratti rakkoo hin qabu jedhanii amananis, Hassan garuu namoota shakkii qabaniif yaada agarsiistuu qaba. Gorsa gaariin namoonni yeroo ilkaan qulqulleeffatan saaamunaa ilkaanii xiqqoo fayyadamuu qabu, kun qabiyyee meentaa[mint] keessa jiru sana xiqqeessa. Gara biraan ammoo rigaa mukaa fayyadamuu, kun uumamaan waan rakkoo qabu miti. Dhaabatni Fayyaa Addunyaas yeroo gabaabaadhaaf itti fayyadamuun akka danda'amu gorsa.
Hancufa [gorora] kee liqimsuu hin qabdu
Goodayyaa suuraa Nama dhungachuun sooma cabsa
Hancufa kee liqimsuun eeyyamamaadha rakkoo tokkollee hin qabu ,ni jajjabeeffama.Kun guutummaatti ilaalcha dogogoraati,hancufa ofii liqimsuun uumamaan kan namaaf kennamedha.
Wanti sooma namaa cabsuu danda'u garuu dhangala'aa nama biraa ofitti fudhachuu ykn liqimsuu dha. Hancufa nama biraa liqimsuun yeroo soomaa wanta dhorkamudha jedha Hasan .
Haadha warraa kee ykn hiriyaa kee dhungachuu hin qabdu ykn baayee itti dhiyaachuu hin qabdu .yaadni soomaa guutuun fedha mataa kee to'achuu ,kun ammoo nyaata ,dhugaatii fi hariiroo cimaa qabaachuu irraa of qusachuudha.
Kan biraan waa'ee nyaataa fi dhugaatiiti.
Goodayyaa suuraa Namoonni sooman hamii fi nama arrabsuurraa of eeguu qabu
Wantootni sooma cabsan nyaataa fi dhugaatii qofa miti .Cubbuuwwan arrabaan dhufan ykn dubbataman sooma fudhatama dhabsiisuu danda'u.
Yoo duuba namaa nama miidhuuf yaalte ,hamatte.ykn namoota biraan kakate soomni kee gatii dhabuu danda'a,jedhe Hasan.
Akka tasaa nyaachuun ykn dhuguun sooma nama hiiksisa
Goodayyaa suuraa Daa'ima adda qabattee jirtu
Yoo guutummaa guutuu yaadakeen soomaa jiraachuu kee dagattee nyaatte ykn dhugdee ,akkuma yaadatteen ammoo yoo dhiiste ammayyuu soomni kee fudhatama qaba.
Haa tahu malee haala dhorkamaa kan akka yeroo kadhanna duraa ,yeroo dhiqannaa fi qophii irratti yoo nyaatte soomni kee fudhatama hin qabu.
Seerota qophii kadhannaa duraa saddet keessaa tokko afaan luluuqachuu dha.Yoo tarii yeroo akkasii bishaanicha liqimsite soomni kee addaan citeera ykn hiikteetta jechuu dha.
Hasan akka jedhutti yeroo qophii kadhannaa sooma keessa taasiftu tuttuqqii kamirraayyuu bilisa tahuu qabda. Afaan kee akkuma luluuqatteen alatti tufuu qabda.
Dawaa ykn qoricha fudhachuu hin qabdu
Goodayyaa suuraa "Firstly, if you have a medical condition, the first thing to ask is should I be fasting at all?"
Manni maree Islaamaa Briiteen, waldaa Idila Adunyaa Gilaakoomaa waliin tahuun akeekkachiisa namootni qorichoota muraasa fudhachuu qabu kan akka qoricha ijaafaa jedhu dabarsee ture.
Akkasuma MCB waraqaa fayyaa ramadan [Ramadan Health fact sheet] hospitaaala keessatii hojiira oolu qopheesee kenneera. Isaanis qorichoota kan akka qoricha ija keessa buufatan,gurra keessa buufatan,lilmoowaan,fi qorichoota karaa qaama saalaa kennaman hammata. Namoonni yaalii kanneen irra jiranis addaan kutuu akka hin qabnee fi sooma keessatti eeyyamamaa tahuu barreessaniiru.
Haa tahu malee qorichoota liqimsuun soomiin booda ykn dura tahuu qaba malee yeroo soomaatti fudhatama hin qabu jedhan.
Akka yaada Hasaniiti yoo durumaan si dhukkuba tahe soomuun dandahaa? jettee gaafachu qabda. Quraana irras kan jiru yeroo hundumaa gorsa ogeessaa hordofuu qabda kan jedhu dha .
'Waan fedhe yoo tahe iyyuu soomuu qabda
Goodayyaa suuraa Older people are among those who are exempt from fasting
Amantaa Islaamaa keessatti namootni dirqama soomaa qaban namoota fayyaa guutuu qabanii fi umuriinsaanii gahe jechuun wagga 15 ol tahan qofaa dha.
Ijoolleen soomuu danda'uu?
kuni daa'imman xixiqqoo hin hammatu, warreen hanqina qaamaa qaban, sammuunsaanii dhukkubu, imalarra jiran,dubartoota ulfaa fi harma hoosisan hin hammatu akka ICB ti.
Manguddoota sababa garaagaraan soomuu hin dandeenyeef karaan osoo of hin miidhiin jireenya afuuraasanii cimsatan biraan jira .Yoo dhukkuba haala salphaan irraa bayyanachuu danda'an tahe guyyaa biraa soomuu danda'u.Yoo kan yeroo dheeraaf dhukkubu tahe garuu fadyah taasisuu qabu. Kun guyyaa guyyaatti maallaqa xiqqaa akka kennaattii namootni maatii hiyyeessaa akka ittiin sooramaniif kennuu qaba.Akka UKti pawondii afurii hanga shanii gidduudha .